Ringkekọrịta bụ ihe dị mkpa karị ma m mehie. Obi na-adị m ụtọ ma ndị mmadụ gwa m na m nọ n’okwute m. Taa, m nwetara ọrụ ịgba mbọ na-arụ ọrụ gbasara oke ibu ọrụ m na ọrụ m. Eziokwu bụ, ọ bụ tiff n'ihi na m kpọrọ asị ókè. Achọghị m ka otu m na m na-arụ ụka banyere ihe ọrụ m bụ na ihe ọrụ ha bụ. Naanị m chọrọ ị nweta otu ndị isi ọnụ iji dozie nsogbu darn! Ọ bụ ya!
N'oge nrụgide na ụlọ ọrụ, anyị na-achọ ịlaghachi ibu ọrụ na oke. Ọ bụghị ihe na-atọ ọchị na mgbe ịmalitere ụlọ ọrụ na oke ndị ahụ adịghị adị? Onye ọ bụla na-agbanye n'ihi na ha niile nwere ka ọ bụrụ na ha chọrọ ịlanarị. Kedụ ka anyị ga-esi mee ka ike ahụ ka ị na-eto site na ndị ahịa 5 ruo 10 ruo 5,000? Echere m na ọ bụ otu n'ime ihe nzuzo kachasị mma nke nnukwu ụlọ ọrụ. Ka heck na Filiks, akwụkwọ, na-atụ aka fingers. naanị mee ya! Ọ bụ ya mere m ji azụ ahịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ana m eleda ndọrọ ndọrọ ọchịchị anya, ọkachasị ndọrọndọrọ ọchịchị.
Ya mere m tiri mkpu, ha tie mkpu, m wee tibekwuo mkpu wee pụọ. Emechaa, anyị gabigara ya. Anyị bụ ndị otu ka mma n'ihi ya. Achọrọ m ka ọ ghara ime? Ọ dịghị ma ọlị! Ha aghaghi ighota otuu obi di m na onye m bu ka anyi nwee ike iru oru nke oma. Ana m asọpụrụ ha karịa maka ịkwanye azụ karịa. Ugbu a enwere m ekele maka echiche ha.
Achọrọ m ka mụ na mmadụ niile rụọ ụka ndị a. Adị m mma mgbe ị na-agwa m ihe dị gị mma. Anaghị m ekwu na m ziri ezi ma ọ bụ na ị na-ezighị ezi… anyị onye ọ bụla nwere echiche nke anyị na nkwenkwe. Anyị ka mma dị ka otu otu n'ihi ọdịiche anyị.
M na-atụpụrụ echiche m nye onye ọ bụla chọrọ ịgụ ya. Enwere m ndị na - agụ akwụkwọ ole na ole otu ụbọchị ugbu a na ụbọchị ole na ole ọ bụla n’ime ha ga - atụpụrụ m okwu ma ọ bụ obere ederede na - eme ka m chee echiche banyere ihe m dere. Ternyaahụ, onye ndu nke ụlọ ọrụ GIS a na-akwanyere ùgwù nyefere okwu 2 banyere ntinye ikpeazụ m na Google Maps: "Mmezi nke ọma!". Ọ mere ụbọchị m!